Iminyaka eyi-120 yeNational Geographics - Geofumadas
Iminyaka eyi-120 yeNational Geographics
NgoFebruwari, 2010 ezintsha
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, umhlobo owafudukela ezweni lakhe wandinika iqoqo lakhe le-National Geographics lephephancwadi, apho yonke into kunye neebhu ngoku kuthatha inxalenye enhle yomthengi wamabhuku, ngoko ke xa idijithali yesigidimi ivakaliswa kwi disk ekhuni I-160 GB ndifumene loo mania ngokungayivumeli ukuba ihambe. Emva kokushushumbisa iminyaka emininzi, ukwazi indlela ikhompyutha efanelekileyo yenziwa ngayo kwi-1972 kwaye ufumanisa ukuba rhoqo rhoqo sinesihloko esifanayo kodwa nangakumbi uphando, ndiyazi ukuba yinto ezuzekayo.
Iminyaka eyi-120 yezinto eziphathekayo, ukusuka kwi-1888 ukuya kwi-2008 equlethwe kwi-disc ye-160 GB, nangona umxholo solo ifika kwi-100 GB kwaye ihamba ne-60 yendawo yokukhulula, ayiyiyo yonke indawo ichithekile. Kwakhona kunokuba luncedo ngaphezu kokuqokelela iiDVD ezikhathazayo ukuba ziguqulwe ezimbini kwizinto ezintathu zokukhangela.
Unokukhangela ngonyaka, oku kubonisa ikhathalogu ebonisa iifom yefowuni. Emva koko unokhetha, upheqa uphinde ukhuphaze njengamaphephancwadi ase-intanethi ngoku ahambayo.
Unokuphinda ukhangele indawo yendawo, ebonisa imephu ye-Bing (eyayisakuba nguMhlaba oyiNtlabathi). Xa sele ikhona kwindawo, cwangcisa uphando lwee-thematic, olubonisa i-radius yeekhilomitha. Olu khetho ludinga ukuxhumeka kwi-Intanethi, ukubonisa imephu kuphuculwa kodwa kulindelwe ukuphuculwa kwixesha elizayo elinokuba liwindow ekhudlwana.
Ukukhangela ngamagama angundoqo kukumangalisa, umzekelo, ukuba ndifuna iiflegi zamazwe e-American Union, kufuneka ndibeke nje iiflagi zithetha iMerika, kunye ne-voila, yapapashwa ngo-Oktobha ka-1917.
Hayi, heh, yabona indlela enomdla ngayo i-Colorado shield. Ndifungela ndiyibonile kwindawo ethile.
Kukho uphando nokuqokelela kunye nokusebenza kokumaketha okubizwa ngokuba luhlu lokufunda, apho unokubeka khona amanqaku ngendlela yeebhalile ngokwemfuno. Ngokomzekelo, njengoko ndihamba, xa ndifumana ibalazwe elincamisayo, ndiyakwazi ukulilayisha kwi "mapuphu anomdla kwiimephu ze-geofumed" okanye "imephu yaseMexico", ukufumana ngokuchofoza nanini na.
Iphuhliswe kwi-Adobe Air, ngoko ukuhlaziywa kwe-intanethi kuyonwabile, imiba iincwadi ze-encyclopedias zakudala azikwazanga ukunqoba. Ngethuba lokuqala ekulipheleleni, wachitha ixesha lakhe ekukhutsheni ukwakha entsha, kodwa ubalekela kumangalisa.
Ukusebenza ngumphakathi ongaqhelekanga, kuba imenyu yokufikelela kwedatha, ukudala uluhlu lokufunda nokuhamba nge-back and out is unfriendly. Emva kweeyure ezimbalwa zomlingo ziziva zibhetele, nangona kungenakulimaza ipaneli yecala kulula ukuhamba ngaphaya komxholo kunye nokuphucula ukuqonda indlela yokubuya.
Ku nokuba njalo fumana i-intanethi idiresi ye-US $ 199, ebonakala iphakamileyo kodwa ukuba siyayiphula, sicinga ukuba kukho amaphephancwadi e-12 ngonyaka, kuya kuba:
I-hard drive ye-160 GB: US $ 80.00
Igama elirekhodiweyo kwi-disc: US $ 9.00
I-120 iminyaka yamaphephancwadi: US $ 110
Ngale ndlela, nganye iphephancwadi kwidijithali iyafaneleka:
okanye i-5 centi yeYurophu,
1 Isisindo esitsha saseMexico,
I-39 pesan Chile
okanye i-1.53 Honduran Lempiras
Ekugqibeleni, ukufumana enkulu. Inyana yam iyayithanda, ukungabi namacala kuye kwathintela umphefumlo wam:
Ngaba unganinika yona xa ndingasayi kuhlala?
Magazines egeomates My
Post edlulileyo«Edlulileyo I-2 Geofumadas kwi-fly and 6 links
Post Next Guqula degrees / imizuzu / lemizuzwana wokugqibelaOkulandelayo "